အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Nhpo Nhpo - ဝီကီပီးဒီးယား
အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Nhpo Nhpo
၁ ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Nhpo Nhpo !
၄ မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကား ဦးစီးဌာန အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း
၆ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀
၇ အသူရာ အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း
ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Nhpo Nhpo !ပြင်ဆင်
--Welcome-Bot (ဆွေးနွေး) ၁၄:၃၁၊ ၂၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
ဝီကီအက်ိုးသယ္ပိုးလိုပါသည္။ Nhpo Nhpo (ဆွေးနွေး) ၁၁:၀၈၊ ၁၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ (UTC)
မင်္ဂလာပါအသုံးပြုသူ:Nhpo Nhpo လူကြီးမင်းပြုပြင်ခြင်း၊ ရေးသားထည့်သွင်းမှုများကို တွေ့ရှိရပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကား ဦးစီးဌာန တွင် အသုံးပြုရေးသားသော ဘာသာစကားစနစ်/ဝီကီပီးဒီးယား ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ရေးသားမည်ဆိုပါက ယူနီကုဒ်စနစ်ကိုသာ အသုံးပြုစေလိုပါသည်။ ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ပါက မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်း သို့ထည့်သွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပါရစေ။
မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကား ဦးစီးဌာန အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်းပြင်ဆင်
ဟဲလို! ဝီကီပီးဒီးယားက ကြိုဆိုပါတယ်။ မည်သူမဆို ဝီကီပီးဒီးယားတွင် ပါဝင်ရေးသားရန် ကြိုဆိုသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကား ဦးစီးဌာန ကဲ့သို့သော မသင့်တော်သော စာမျက်နှာများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မူဝါဒများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ အကယ်၍ စမ်းသပ်မှုများကို ပြုလုပ်လိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ sandbox ကို အသုံးပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက် အပိုင်း G3 အရ စာမျက်နှာအား ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားပါသည်။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် ဤအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်ရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက၊ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ကာ "ဤမဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်"ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ရှင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုသည် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံရပြီးပါက စာမျက်နှာကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ရန် သတိပေးချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားပါနှင့်။ သူထွန်း (ဆွေးနွေး) ၁၂:၅၉၊ ၁၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ (UTC)
ဟုတ္ကဲ႕ Nhpo Nhpo (ဆွေးနွေး) ၁၄:၃၅၊ ၁၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ (UTC)
ဟုတ္ကဲ႕ေက်းဇူးပါ Nhpo Nhpo (ဆွေးနွေး) ၁၅:၅၃၊ ၁၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ (UTC)
မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကား ဦးစီးဌာန မှာ သင်ပြုလုပ်ခဲ့သလိုမျိုး ဝီကီပီးဒီးယား စာမျက်နှာများထဲမှာ ဇော်ဂျီဖောင့်ဖြင့် တည်းဖြတ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပေးပါ။ ဖောင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်များအတွက် ဤစာမျက်နှာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ စမ်းသပ်လိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ sandbox မှာ ပြုလုပ်ပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၉:၂၂၊ ၂၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ (UTC)
ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ ဖျက်လိုဖျက်ဆီး တည်းဖြတ်မှုအား ရပ်တန့်ပါ။ အကယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကား ဦးစီးဌာနတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သကဲ့သို့သော နောက်တစ်ကြိမ် ဝီကီပီးဒီးယားတွင် ယူနီကုဒ်စံနှုန်းကို လိုက်နာခြင်းမရှိသောဖောင့်ဖြင့် ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ပါက သင်သည် တည်းဖြတ်ခြင်းမှ ပိတ်ပင်ခြင်း ခံရမည်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၉:၂၈၊ ၂၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ (UTC)
နောက်တစ်ကြိမ် ယူနီကုဒ်စံနှုန်းကို လိုက်နာခြင်းမရှိသည့်ဖောင့်ဖြင့် ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ခြင်းများကို တမင်တကာ ပြုလုပ်ပါက သင့်အား နောက်ထပ် သတိပေးချက်မရှိဘဲ တည်းဖြတ်ခြင်းမှ ပိတ်ပင်ခံရမည်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၅:၁၄၊ ၂၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ (UTC)
၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ပြင်ဆင်
အသူရာ အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်းပြင်ဆင်
ဟဲလို! ဝီကီပီးဒီးယားက ကြိုဆိုပါတယ်။ မည်သူမဆို ဝီကီပီးဒီးယားတွင် ပါဝင်ရေးသားရန် ကြိုဆိုသော်လည်း အသူရာ ကဲ့သို့သော မသင့်တော်သော စာမျက်နှာများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မူဝါဒများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ အကယ်၍ စမ်းသပ်မှုများကို ပြုလုပ်လိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ sandbox ကို အသုံးပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက် အပိုင်း G3 အရ စာမျက်နှာအား ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားပါသည်။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် ဤအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်ရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက၊ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ကာ "ဤမဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်"ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ရှင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုသည် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံရပြီးပါက စာမျက်နှာကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ရန် သတိပေးချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားပါနှင့်။ သူထွန်း (ဆွေးနွေး) ၀၆:၁၆၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Nhpo_Nhpo&oldid=511720" မှ ရယူရန်
၂၃ ဧပြီ ၂၀၂၀၊ ၀၅:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ ဧပြီ ၂၀၂၀၊ ၀၅:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။